HomeArimaha QoyskaU Gaar Ah Dumarka: Sidee Gacaliyahaaga Uga Dhigi Kartaa Mid Waali Kuu Xiisa
Marka ay muddo ka soo wareegto Jacaylka ka dhexeeya wiilka iyo Gabadha waxa ay Inta badan Gabdhuhu doonaan in ay dib u cusboonaysiiyaan xidhiidhkooda iyaga oo Gacaliyohooda ka dhiga mid si aad ah ugu xiisa marka loo eego in Ragga intooda badan ay marka ay muddo la socdaan gabadha aan u jeclaan sidii ay markii hore u jeclaayeen.
Taas ayaa dumarka ku keenta in ay dumarku dareemaan caajis kana fikiraan wado ay Gacaliyeeda uga dhigaan mid si waali ah ugu xiisa.
Hadaba Sidee Ayaad Gacaliyahaaga uga dhigi kartaa mid si waali ah kuugu xiisa?.
Sida aan ognahay dumarka dhamaantood ayaa jecel Ragga daneeya waliba ka dhiga muhiimadooda ugu horaysa laakiin inta badan dumarka ayaa ku fashilma in ay gaadhaan marxaladaad sabab la xidhiidha dhaqan aan fiicnayn oo ay sameeyaa iyaga oo doonaya in ay gacaliyohooda dib isku jeclaysiiyaan.
1.Wakhti La Qaado Saaxiibadaa:
Haddii aan mar walba garab joogto gacaliyahaaga waxa uu kugu dareemayaa caajis waxana uu la qabsnayaa joogistaada badan laakiin yaraynaysa dareenka uu kuu qabo laakiin marka aad wakhti ka fogaato waliba si farsamo leh isaga indha tirto waxa uu bilaabayaa in uu ku raadiyo waxana uu kuugu xiisayaa si waali ah.
waxa aad wakhti la qaadan kartaa saaxiibadaa adiga oo la aadi kara suuqa ama qabsan kara arimo kale oo danahaaga ah.
2.Waxa Aad u Dhaaftaa Wax Aad adigu leedahay:
Arintan ayaa keenaysa in uu kaa fikiro marka aad maqantahay hadii aad u dhaafto ama u reebto Wax Aad Adigu leedahay sida Albaab kuu khaas ah waxa ay ka dhigaysaa in uu inta aad maqantahay oo dhan kaa fikiro waliba meel walba kaa raadiyo.
3.Hakaga horayn xidhiidhka:
Hadii aad si joogto ah ula xidhiidho gacaliyahaaga waxa ay arintaas ka dhigaysaa mid la qabsada arintaas mar walba oo aad ka maqnaatana kuma raadinayo kulamana soo xidhiidhayo sababta oo ah waxa uu la qabsaday in aad adigu kaga horayso xidhiidhka laakiin hadii aanad adigu kaga horayn dhanka xidhiidhka waxa uu bilaabayaa in uu ku raadiyo si uu xaalkaaga u ogaado isaga oo waliba kuu xiisay.
4.Fariimaha Uu Kuu Soo Diro Horay Ha Uga Jawaabin:
Marka uu fariin kuu soo diro isla markiiba ha u jawaabin taas oo Gacaliyahaaga ka dhigaysa in uu si waali ah kuu sugo waliba is waydiiyo waxa aad qabanayso ee aad ugu soo jawaabi laadahay taas oo keenaysa in uu kugu mashquulo si waali ahna kuugu xiiso.
5.U Samee Waxyaabo Lama Filaan Ah:
Waxa aad u samaysaa gacaliyahaaga lama filaano adiga oo aan u sheegin tusaale ahaan adiga oo fariin jacayl oo cajiib ah u reebaya adiga oo aan u sheegin laakiin ugu qoraya warqad adiga oo u dhex galinaya dharka uu ku labisanayo marka uu shaqada aadayo taas oo ku noqonaysa lam filaan waliba keenaysa in uu adiga kaa fikiro marka uu warqada Akhriyo.